Aoka tsy hisy olona hanao tsinontsinona anao noho ny hatanoranao; fa aoka ho tonga fianarana ho an’ny mino ianao amin’ny FITENY, amin’ny FITONDRAN-TENA, amin’ny FITIAVANA, amin’ny FINOANA, amin’ny FAHADIOVANA”( I Timoty 4,12 )
Endrika roa ary toetra telo no tsara ananan’ny tanora Kristianina, hafahany mivelatra sy ho tonga modely maha tia ho tia, ka tsy hisy hanao tsinontsinona azy intsony fa anjary alain-tahaka indray aza.
1- Endrika amin’ny Fiteny: raha amin’ny fotony voalohany, dia ny fahaizana sy fahalalana no tiana ambara. Hita amin’ny fiteny ny fahaizana amam-pahalalana hananan’ny olona iray.
2- Endrika amin’ny Fitondra-tena: olona mahay mandanjalanja ny fihetsika, fomba ary fitafy amin’ny fotoana sy ny toerana misy azy.
3- Toetra be Fitiavana: fitiavana AGAPE no tiana lazaina, ka olona tia mizara sy manome ary mahafoy fa tsy miandry tolorana foana sy mitady ny “interet”-ny manokana.
4- Toetra manana Finoana: olona mahatoky, mahafantatra ny lalana alehany, tsy mihemotra ary tsy mampihemotra, tsy matahotra fa sahy. Olona manana “conviction”.
5- Toetra misy Fahadiovana: raha amin’ny teny frantsay dia “pureté du Coeur”, olona madio fo, ary mahitsy.
Noho ireo, dia tokony tsy hitsaha-mianatra isika tanora, indrindra isika Kristianana. Tokony maharaka foana ny zava-misy rehetra mba ho olona mahafinaritra hainoana. Tokony ho olona tsy mahatohina ny hafa amin’ny fitondra-tena, fa olona mahafinaritra jerena sy hiaraha-miaina. Olona manao zavatra am-pitiavana, mahafoy fotoana, mahafoy vola, mizara fahalalana,sns… Indrindra indrindra amin’ny asan’Andriamanitra. Olona vonona hiatrika ny ho avy am-pahatokisana, tsy mihaotra ny manao sy manatanteraka zavatra, ary tia mandray andraikitra. Tsy atao ho olana tsy hampandroso ny tsy fahampiana traikefa satria amin’ny fanatanterahana ny zavatra ihany no hahazoana traikefa. Ary olona tsy mba mpietsara ivela-tsia, izay toetra farany izay tsy tian’I Jesoa Kristy indrindra, noho izany mila manakaiky foana an’Andriamanitra isika mba hafahantsika manana izany fahadiovam-po izany.
Lohahevitra novelabelarin’i Pasteur Dina